ukuphawula kwemakethe | Ibhulogi ye-FXCC
Okuthunyelwe Kwamakwe 'amazwana emakethe'
I-Terminal Velocity, i-IMF ne-Goldman Sachs Do The Math
Sep 19, 11 • Ukubuka kwe-4840 • Amazwana eMakethe • 1 Comment
Amabhange ayishumi aseJalimane amakhulu adinga € 127 billion imali eyengeziwe imali iphephandaba laseJalimane uFrankfurt Allgemeine Sonntagszeitung kubika ngempelasonto, ecaphuna ucwaningo ngesikhungo sezomnotho ucwaningo DIW. Leli phepha lacaphuna uDorothea Schaefer, ...
I-Fuel for Thought
Sep 19, 11 • Ukubuka kwe-1937 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off kwi-Fuel for Thought
I-United States ingumkhiqizi omkhulu kunazo zonke emhlabeni we-ethanol fuel. I-US yakhiqiza i-50.0 billion amalitha kagesi ethanol ku-2010. Amafutha e-ethanol asetshenziselwa ikakhulukazi e-US njenge-oksijeni ekwenzeni uphethiloli. Ku-2009, kusuka kuwo wonke amandla e-ethanol adliwe ku ...
Igama leBond, i-Eurobond
Sep 15, 11 • Ukubuka kwe-3565 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off kwiBond yegama, i-Eurobond
Umongameli we-European Commission uJoseph Manuel Barroso unomsebenzi futhi usekelwa yizintambo zamaphrofayli aphezulu njengendlela 'yokulondoloza inhlekelele' ye-debt crisis yase-Euroland futhi ngaphezu kwalokho amabhange amakhulu aseYurophu ahlangene. Uhlelo luzokhipha ...
Uma i-European Monetary Union idilika okwenzekayo ngokulandelayo?
Sep 14, 11 • Ukubuka kwe-3644 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off Uma i-European Monetary Union idilika okwenzekayo ngokulandelayo?
Phakathi kwezici eziningi zesintu abaningi bethu bathola into engathandeki i-penchant yokuthi "nginitshela kanjalo" kufanele ibeke phezulu. Ukulalela, noma ukufunda ukuhlaziya okuvela eziphikisweni zesikhathi eside ze-European Union, manje manje basking in fifteen yabo ...
Yiphinde ibe ngotshani omude, uyikhasele ngokuqhubekayo, bese uyibeka
Sep 14, 11 • Ukubuka kwe-7098 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off Uma uyikhiphela otshanini obude, uyikhasele ngokuqhubekayo, bese uyomngcwaba
Kwakukhona izomnotho ezihlonishwayo ezifana noNouriel Roubini, lapho nje, i-2005-2006, ebona izingozi ukuthi uhlelo lwebhange lwezithunzi lungabangela izimakethe zezikweletu. Lapho ukuboshwa kwenhliziyo kufika ku-2007-2008, kuqhutshelwa yi-Bear Sterns futhi ekugcineni ...
E-Australia, kungani abathengisi 'boom nobumnyama' behamba futhi beqinisa imimese yabo?
Sep 13, 11 • Ukubuka kwe-4156 • Amazwana eMakethe • 1 Comment
Kuwo wonke ama-maelstrom wezezimali emhlabeni wonke owake waba khona kusukela ku-2007-2008 Australia uye waqhubeka ekhuphuka. Ngisho nochungechunge olubhebhethekisa lwezikhukhula ezitholakale kuJan kulonyaka (2011) luvele luzofika nje kuphela ezweni elikhulu ...
Ungakhohlisa abanye abantu isikhathi esithile, kodwa ngeke ulahlekise izimakethe ngaso sonke isikhathi
Sep 9, 11 • Ukubuka kwe-3467 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off Kuwe ungakhohlisa abanye abantu isikhathi esithile, kodwa ngeke ulahlekise izimakethe ngaso sonke isikhathi
Ingabe umuntu "angenza izibalo" njengoba uMengameli Obama ecela Congress? Udala kanjani imisebenzi eyishumi yezigidi elahlekile e-USA kusukela ku-2007 ene-$ 447 yezigidi zamaRandi? Ungadonsela kanjani lawa onogwaja ngaphandle kwezingubo ngenkathi ugcina isikweleti ngaphansi kwesikole ...
Imakethe ihamba futhi iMakethe ithatha
Sep 8, 11 • Ukubuka kwe-3309 • Amazwana eMakethe • Amazwana Off kwi-Market Market kanye neMakethe Thatha
Kusukela ibhange likazwelonke laseSwitzerland 'liphuma' uchungechunge lwezimbili zokuhweba ngokuzimisela kwabo ekusebenziseni 'isikhonkwane' i-franc, amaqembu e-CHF ayengenakulinganiswa. Ngisho kusuka ekuboneni kwezebhizinisi okungaba khona kwezimali eziningi ...
Sep 7, 11 • Ukubuka kwe-8939 • Amazwana eMakethe • 2 Amazwana
Leli gama elisha noma elisha elivuselelwe kuzo zonke izindebe zomzimba emva kokuqhuma kwesibhamu esishaqisayo, (esinikezwe isiqondiso esinqunyiwe se-laser yi-central central bank), "yimpi yemali". Ngaphambilini le nkulumo yayigcinwe ukuthi kufanele ...